Horudhac: Barcelona vs Atletico Madrid… (Blaugrana oo caawa doonaysa inay waddada guusha dib ugu soo laabato) – Gool FM
Horudhac: Barcelona vs Atletico Madrid… (Blaugrana oo caawa doonaysa inay waddada guusha dib ugu soo laabato)
Haaruun June 30, 2020
(Barcelona) 30 Juun 2020. Koooxda kubadda cagta Barcelona ayaa eegeysa inay waddada guusha dib ugu soo laabato marka ay kulan ka tirsan horyaalka La Liga 2019-20 ay soo dhoweynayso caawa naadiga Atletico Madrid.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Spain ayaa barbaro gashay labo ka mid ah saddexdii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Spain, taasoo fursad siisay Real Madrid inay gacanta ku dhigto hoggaanka horyaalka La Liga.
Yeelkeede, Kooxda Atletico Madrid ayaa guul gaartay afar kulan oo xiriir ah oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
Taariikhda: Talaado 30 Juun 2020
Garsooraha: Alejandro Hernandez (Spain)
Sergio Busquets ayaa ganaax uu la maqnaa dib uga soo laabanaya kulankan, waxaana uu ka soo muuqan karayaa khadka dhexe ee Barcelona.
Ivan Rakitic ayaa la filayaa inuu ku soo bilowdo booska khadka dhexe ee Barca, iyadoo Arthur la filayo inuu soo fariisto kursiga keydka, kaddib markii uu u safray Talyaaniga si uu u dhammaystiro u dhaqaaqistiisa Juventus.
Antoine Griezmann ayaa safka hore ugu soo bilaaban kara Barca, isagoo wajahaya Kooxdiisii hore, kaddib markii uu dhowaanahan bandhig liita ku soo bandhigay naadiga Blaugrana.
Koke ayaa ganaax ku seegaya kulankan, isagoo ka maqnaanaya kooxda martida ah, sidaas darteed Thomas Lemar ayaa la filayaa inuu si fiican uga soo muuqdo dhanka bidix ee kooxda Atletico Madrid.
Stefan Savic ayaa sidoo kale ganaaxan oo casaan ku maqan, sidaas awgeed Felipe oo dhaawac ka soo laaban kara ayaa dib uga soo muuqanaya daafaca dhexe ee kooxda booqdayaasha.
Santiago Arias ayaa la rajeynayaa inuu u wareego dhanka daafaca midig, halka Thomas Partey laga yaabo inuu seego kulanka iyadoo Hector Herrera lagu arki karo khadka dhexe.
>- Barcelona ayaan la garaacin 28-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo garoonkeeda ku ciyaartay kulammada horyaalka La Liga.
>- Kooxda Barcelona ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay afartii kulan ee ugu dambeeyay oo ay garoonkeeda ku dheeshay horyaalka La Liga.
>- Atletico Madrid ayaa guuleysatay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Kooxda Atletico Madrid ayaa ku adkaatay hal gool saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
Muxuu ka yiri Arthur Melo kaddib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay heshiiska uu ugu biiray Juventus??
Horudhac: Brighton & Hove Albion vs Man United… (Red Devils oo raadinaysa inay guuldarro la'aanteeda xiriirka ah sii wadato marka ay caawa booqanayso Brighton)